Modely Tranonkala Maimaimpoana: Hevitra hamoronana tranokala anao | Famoronana an-tserasera
Modely tranokala maimaimpoana
Encarni Arcoya | | lohahevitra
Rehefa manomboka pejin-tranonkala ianao, dia ara-dalàna aminao ny misafidy rafitra iray ho azy, na WordPress (talohan'ny nampiasana azy ho an'ny bilaogy, fa ankehitriny dia pejy maro no miorina amin'izany, ary koa ho an'ny fivarotana an-tserasera), PrestaShop .. . Fa koa azo atao ny manao tranonkala misy HTML, raha ny marina dia afaka mahita modely tranonkala maimaim-poana amin'ny Internet ianao izay manampy anao amin'ny famolavolana ny pejinao manokana tsy miankina amin'ny CMS, izany hoe rafitra fitantanana atiny.
fa, Ahoana ny html tranonkala? Ary iray amin'ny CMS? Ary ireo modely tranonkala maimaim-poana? Mendrika ny hamorona tranokala toy izao? Izany rehetra izany, ary ohatra amin'ny maodely maimaimpoana tsara, no tianay horesahina manaraka.
1 Inona no tranonkala HTML
1.1 Ny fahasamihafana misy eo amin'ny tranonkala HTML sy tranonkala CMS
2 Inona no tsara kokoa, tranokala HTML na tranokala CMS
3 Modely tranokala maimaimpoana
3.3 Restaurant Cafe
3.4 Template an'ny tranonkala maimaim-poana: Hotel
3.6 Template an'ny tranonkala maimaim-poana: laharana
3.7 Modely tranokala maimaim-poana: maniry
Inona no tranonkala HTML
Alohan'ny hahalalana hoe inona ny pejin-tranonkala HTML dia mila fantatrao hoe inona ny foto-kevitry ny pejin-tranonkala iray. Izy io dia azo faritana ho toy ny antontan-taratasy izay ametrahana "marika". Izany hoe, singa izay misy kaody izay manolotra singa sasantsasany amin'ny fomba iray. Ary ny tena izy dia mahay mamantatra ireo marika ireo sy manazava azy ireo ny mpitety tranonkala, manao izay hahitan'ny mpampiasa ny valiny farany, fa na iza na iza namorona azy ireo, ankoatry ny fanehoana izany valiny izany, dia mahalala fa izany rehetra izany dia mifototra amin'ny antontan-taratasy iray izay ananany noforonina.
Amin'izao fotoana izao, amin'izany ny fiteny fandaharana ampiasaina hamoronana pejin-tranonkala dia antsoina hoe HTML, ary ny antontan-taratasy dia mampiasa maodelin-tranonkala amin'ny HTML hahafahana miasa ao aminy, manova, manitsy, manala ... mba ampanjifaina ny tranonkala mifanaraka amin'ny mpampiasa. Ho fanampin'izany, mamela ny fampidirana ireo rafitra hafa, toy ny Flash (efa mihena izao), horonan-tsary, audio, sns.
Rehefa nandeha ny fotoana, ny HTML dia niova fanovana. Ny tena misy ankehitriny, indrindra rehefa mitady modely, dia HTML5, nefa koa, ary mba hifaninana amin'ireo mpitantana atiny dia manana CSS3 ianao, fandaharana famolavolana izay mahatonga ny tranonkalanao ho kanto kokoa, matihanina ary ambonin'ny asany rehetra.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny tranonkala HTML sy tranonkala CMS
raha ny marina, tranokala HTML sy tranokala CMS dia tsy dia mifanalavitra; ary miaraka amin'izay koa izy ireo.
Ny tranokala HTML dia miainga avy eo am-boalohany, tsy dia misy fahalalana momba ny programa, noforonina izy io, ilaina fotsiny ny fahalalana. Ary koa, manampy ny fisian'ny modely tranonkala maimaim-poana izay mamaha ny olana aminao.
Amin'ny lafiny iray, ny tranonkala CMS tenany dia ampahany amin'ny programa iray izay tompon'andraikitra amin'ny fanomezana fototra ny pejy, ary avy amin'izany dia namboarina tamin'ny alàlan'ny modely (na ianao no mamorona azy, amin'ity tranga ity mampiasa HTML) na amin'ny fisafidianana ny sasany ( maimaimpoana na karama).
Inona no tsara kokoa, tranokala HTML na tranokala CMS
Tamin'ny voalohany, rehefa nanomboka noforonina ireo pejin-tranonkala voalohany dia saika vita tamin'ny alàlan'ny HTML avokoa. Ny fahatsorana ny fahafahany manao azy ireo amin'ny rakitra Word (mitahiry azy ireo taty aoriana toy ny fisie HTML), manana kaody izay tsy mila ianarana (noho ny voalaza etsy ambony) ary haingana be mamorona, nahatonga ireo pejy hivelatra ary saika samy nahavita nanana ny anao manokana.
Na izany aza, ny endrika amina tranokala HTML dia tsy mitovy amin'ny CMS. Raha ampianay amin'izany fa mifantoka bebe kokoa amin'ny "fitakian'ny" mpampiasa izy ireo, ary mamela antsika hanao mihoatra ny tranokala tsotra izy ireo, tsy azo lavina ny safidy.
Raha tranokala tsotra ny zavatra tadiavinao, tsy mitaky be izany, na manana pejy maro, azonao atao ny misafidy HTML hifehezana ny lafiny rehetra amin'ny tranokalanao. Etsy ankilany, raha mila manana matihanina matihanina kokoa ianao miaraka amina endriny misimisy kokoa dia safidio ireo tranokala CMS (WordPress, Blogger, Magento, PrestaShop…).
Mifantoka amin'ny modely tranonkala maimaim-poana izao, tonga ny fotoana nomenay anao ohatra raha te hanangana tranokala tsotra sy haingana ianao. Tena mora izany, fa noho ny fanampian'ireto maodely ireto dia ho haingana kokoa izy io, satria raha vao manana ny fotony ianao, dia ho tolak'andro tolakandro fotsiny ny fanaingoana azy.
Te hahafantatra ireo modely tranonkala maimaim-poana atolotray anao ve ianao? Ireo dia:
Ity template web maimaimpoana ity dia HTML5 ary azo ampiasaina amin'ny lohahevitra samihafa. Mety ho an'ny orinasa kely izy io ary ny tsara indrindra dia azo ampifanarahana amin'ny telefaona finday, takelaka sns.
Izy io dia manana kinova maimaimpoana, fa misy koa kinova misy karama izay manana maromaro Drafitra mialoha, endrika lohateny, bilaogy, portfolio, fivarotana an-tserasera ...
Raha izay tadiavinao dia modely tranonkala mifantoka amin'ny sary maimaimpoana, mety safidy tsara io. Izy io dia endrika izay manambatra ny HTML5 sy ny CSS3, mamaly (izany hoe mifanaraka amin'ny finday sy ny takelaka) ary miaraka amin'ireo singa namboarina mba hahafahanao mametraka azy araka ny itiavanao azy.
Ity modely ity dia miompana indrindra kafe, trano fisakafoanana, fisotroana, fisotroana sns. Ny endriny dia natao hanolotra traikefa ho an'ny mpampiasa mifototra amin'ny fampisehoana, sary ary fakana sary amin'ny alàlan'ny sary.
Template an'ny tranonkala maimaim-poana: Hotel
Mifantoka amin'ny mpitendry zavamaneno, amin'ny tranokala mozika, fety sns. Azonao atao ny misafidy modely tranonkala maimaim-poana izay manana fomba tena mifandraika, toa an'ity. dia mety hanolotra vondrona mozika, festival ... fa afaka mampiasa fanampiny fanampiny toa ny Google Maps ianao (hamaritana ny toerana nanaovana ilay hetsika), fampidirana sary sy horonan-tsary, bilaogy ... Mamaly ary miaraka amin'ny fanatsarana ny SEO.
Template an'ny tranonkala maimaim-poana: laharana
Raha tsy azonao antoka izay hataonao amin'ny Internet, na manana tetik'asa maro ianao ary irinao ny hitondran'izy rehetra modely tranonkala maimaim-poana, dia mety izany no vahaolana. Izy io dia modely misy HTML5 sy Bootstrap4 izay hamela anao hamorona tranokala tadiavinao. Azo ovaina tanteraka izy io, samy hafa ny fiasan'izy io toy ny portfolio, blog, Google Maps, carousels, menus, animations sns.
Modely tranokala maimaim-poana: maniry
Raha mankany manangana fivarotana an-tserasera, Maninona raha andramana ity modely ity? Izy ity dia eCommerce azonao amboarina haingana. Ankehitriny, mifantoka amin'ny lamaody vehivavy indrindra izy io, saingy azo ampifanarahana amin'ny fahalalana vitsivitsy amin'ny fivarotana vokatra hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » lohahevitra » Modely tranokala maimaimpoana
hace 9 volana
Salama tsara! Aiza ireo rohy hisintonana ireo modely na aiza no ahafahako misintona azy ireo? Ho fanampin'izany, ny endrika hampandrenesana ny lesoka dia tsy mandeha. MISAOTRA
Drafitra ara-barotra: ny maodely farany hitovy amin'ny pro